Chinese Translator | Beauty World Industrial Co.,Ltd ﻿
Beauty World Industrial Co.,Ltd.
Work location 207/B, Myin Wun U Aung Thu St., Industrial Zone (2),Hlaing Thar Yar,Yangon,Myanmar.
Beauty World Industrial Co.,Ltd
•	QCလုပ်သက်အနည်းဆုံး၃နှစ်ရှိပြီး၊နယ်မှလာသူ၊အဆောင်နေနိုင်သူဦးစာပေးမည်။ •	နံနက်၈နာရီမှည၈နာရီထိ အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကော်စေ့၊ပလတ်စတစ်အကြောင်းနားလည်သူဖြစ်ရမည်။
•	လိုအပ်ပါကအချိန်ပိုဆင်းနိုင်ရမည်။ •	အတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍လစာညှိနှိုင်းနိုင်ပါသည်။
Chinese Translator Translator/Interpreter Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Beauty World Industrial Co.,Ltd Translator/Interpreter Jobs Translator/Interpreter Jobs Retail/Wholesale Jobs in Myanmar, jobs in Yangon